IGoli lifuna kubuye umvalelo onamandla | Scrolla Izindaba
IGoli lifuna kubuye umvalelo onamandla
Uhulumeni waseGoli ufuna ukukwazi ukubuyela kumvalelo wokumisa konke, ukuze abhekane nokubhebhetheka kanye nokwenyuka kwezibalo zabantu asebehaqwe i-coronavirus esifundazweni.
UNgqongqoshe woMnyango wezeMpilo eGoli uBandile Masuku, utshele iphephandaba i-Sunday Times ukuthi uhulumeni wesifundazwe ufuna ukuthi kube nokuvalwa okuthe xaxa – “akekho umuntu ozosebenza futhi akekho nozonyakaza” – kuze kuphele amasonto amabili egxegisa imikhawulo ebese ephinde evale futhi. “Ngemuva kwalokho umnotho uvuleke isikhashana, ebese uyavalwa futhi,” usho njalo.
Kepha lesi sinqumo kumele sivele kuhulumeni kazwelonke, ofuna ukugwema ukuthi umvalelo ube khona ukuze bavikele umnotho.
IGoli isizinda salolu bhubhane lwe-Covid-19 eNingizimu Afrika, ngokuhamba phambili ngesibalo sabantu abahaqwe igciwane emhlabeni jikelele. Okungenani, balinganiselwa kwizinkulungwane ezimbili abantu abangeniswe esibhedlela ngenxa yalesi sifo kulesi sifundazwe.